Samuel Akwụsịghị Ime Ihe Dị Mma | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
N’oge ochie, ndị mmadụ na-aga efe Jehova n’ụlọikwuu. Samuel malitere ibi na ya mgbe ọ bụ nwatakịrị. Ọ bụkwa ebe ahụ ka ọ na-arụ ọrụ. Ị̀ ma otú Samuel si gaa biri ebe ahụ? Ka anyị buru ụzọ kwuo gbasara mama ya. Aha ya bụ Hana.
Mgbe Hana lụrụ di, ọ nọrọ ọtụtụ afọ n’amụghị nwa. Ma, ọ chọrọ ịmụta nwa. N’ihi ya, ọ rịọrọ Jehova ka o nye ya nwa. O kwere Jehova nkwa na ọ bụrụ na ya amụta nwa nwoke, na ya ga-akpọta ya n’ụlọikwuu ka o biri ebe ahụ, na-arụkwa ọrụ ebe ahụ. Jehova zara ekpere ya. Ya amụta nwa nwoke, gụọ ya Samuel. Hana mekwara ihe o kwere Jehova ná nkwa. Mgbe Samuel dị ihe dị ka afọ anọ, ọ kpọgara ya n’ụlọikwuu ka o biri ebe ahụ na-ejere Chineke ozi.
N’ụlọikwuu, a na-enwe onye ọrụ ya bụ ịchụrụ Jehova àjà. A na-akpọ ya nnukwu onye nchụàjà. Onye bụ nnukwu onye nchụàjà mgbe Samuel bịara n’ụlọikwuu bụ Ilaị. Ụmụ ya ndị nwoke abụọ na-arụkwa ọrụ n’ebe ahụ. Ì chetara na ụlọikwuu bụ ebe a na-anọ efe Chineke? N’ihi ya, ndị mmadụ kwesịrị ịna-eme ihe dị mma n’ebe ahụ. Ma, ụmụ Ilaị anaghị eme ihe dị mma. Samuel makwa na ihe ha na-eme adịghị mma. Samuel ò so ha mewe ihe na-adịghị mma?— Mba. Ọ nọgidere na-eme ihe dị mma, otú ahụ mama ya na papa ya kụziiri ya.
Gịnị ka i chere Ilaị kwesịrị ime ụmụ ya abụọ ahụ?— O kwesịrị ịta ha ahụhụ. O kwesịghị ịhapụ ha ka ha ka na-arụ ọrụ n’ụlọ Chineke. Ma, ọ hapụrụ ha. Iwe were Jehova, ya ekpebie na ya ga-ata ma Ilaị ma ụmụ ya abụọ ahụ ahụhụ.
Samuel ziri Ilaị ozi Jehova ziri ya
Otu ụbọchị, mgbe Samuel na-ehi ụra n’abalị, ọ nụrụ ka a kpọrọ ya: ‘Samuel!’ Ya agbara ọsọ gakwuru Ilaị. Ma, ọ gwara ya na ya akpọghị ya. A kpọkwara ya òkù a ọzọ, ya agakwurukwa Ilaị. Ma, ọ gwakwara ya na ya akpọghị ya. Mgbe ọ gara nke ugboro atọ, Ilaị gwara ya na ọ bụrụ na a kpọọ ya ọzọ, ya sị: ‘Jehova biko kwuwe; m na-ege ntị.’ Ọ bụ ihe a ka Samuel kwuru mgbe a kpọrọ ya ọzọ. Mgbe o kwuru ihe a, Jehova asị ya: ‘Gwa Ilaị na m ga-ata ya na ndị ezinụlọ ya ahụhụ maka ihe ọjọọ ha na-eme.’ Ì chere na izi Ilaị ozi a dịịrị Samuel mfe?— Mba. O mechara zie Ilaị ozi ahụ n’agbanyeghị na ọ mabughị otú ọ ga-esi zie ya ya. Jehova mekwara ihe ahụ o kwuru. E gburu ụmụ Ilaị abụọ ahụ, Ilaị mechakwara nwụọ.
E nwere ezigbo ihe anyị ga-amụta n’aka Samuel. Mgbe ọ hụrụ na ndị ọzọ na-eme ihe na-adịghị mma, ọ kwụsịghị ime ihe dị mma. Ọ bụrụ gịnwa, gịnị ka ị ga-eme? Ị̀ ga na-eme ihe dị mma otú ahụ Samuel mere? Ọ bụrụ na ị kwụsịghị ime ihe dị mma, ị ga-eme Jehova obi ụtọ, meekwa papa gị na mama gị.
Olee nkwa mama Samuel kwere Jehova?
Gịnị ka Samuel ma na ụmụ Ilaị na-eme n’ụlọikwuu?
Gịnị ka Jehova gwara Samuel ka o mee?
Olee ihe mere anyị ji kwesị ịna-eme ka Samuel?